Ibhayisikobho ngayinye itholakala ku-intanethi, ke unelungelo ukuthatha indawo yayo. Futhi ngakwesokudla, nhlobo, kuyatholakala Abanikazi bamawebhusayithi izinjini ukuthi bekwi simo inethiwekhi imithombo iqondiswa ngokuhambisana izicelo. Izinjini akuzona izinhlelo elula, zonke zibe algorithm eyinkimbinkimbi futhi eyinkimbinkimbi yezenzo. On imiphumela injini yokusesha kuthonywa izici eziningi ezahlukene.
Ukuze isayithi zibalwa omunye imigqa phezulu uhlu nombuzo, kusebenziswe isethi izindlela ezikhethekile ukuthi abizwa ngokuthi izindlela ukukhuthazwa amasayithi. Omunye wabo indlela yokubhalisa indawo e izinjini, ngokukhethekile, kungenzeka ukuba ubhalise indawo ku-Google. Kufanele kuqashelwe ukuthi uma sayithi ngokuqondile eqoshiwe, kusenzima injini yokusesha ye-Google ngokuhamba kwesikhathi kuzokwenza Inkomba nje ukubhalisa le nqubo kuyoba kusheshe kakhulu. Kalula nje, indawo indexation angabhekwa emenza inombolo ethile, ebheka indawo yayo phakathi wonke amawebhusayithi kulesi sihloko.
Njengoba kushiwo ngaphambili, izinjini - izinhlelo ngokwanele eziyinkimbinkimbi. Ngamunye wabo, ngaphezu the main okuyingxenye - robot search, iqukethe e isakhiwo amasevisi ayo eziningana ezengeziwe, okuyinto ukunikeza abasebenzisi nge amakhono angeziwe. Ngakho, uma sikhuluma yokubhalisa ngomqondo obanzi, lesi eside zingase zihlanganise hhayi kuphela yokubhalisa kokufakwa ohlwini isayithi lakho, kodwa futhi ku ekukhishweni amasevisi angeziwe. Cabanga inguqulo enwetshiwe kusayithi lakho efakwe ohlwini ku-Google. incazelo yakhe inikezwe ngezansi.
Zonke izinhlobo, okwenza kube lula ukubhalisa iwebhusayithi ku-Google, kukhona inqubo kahle elula ngoba ndima zabo, futhi ngokuvamile akudingeki ukuba nolwazi olukhethekile. Into ebaluleke kakhulu - ukuthola ukuthi yini amasevisi elinikeziwe enjini, ngamunye wabo ezidingekayo futhi imiphi ukubhalisa. Cabanga zonke izinhlelo injini ye-Google.
Ukungeza isayithi ukuze emgqeni nangenkomba. Kuyinto, ngomqondo ongokomfanekiso, isevisi eyinhloko injini yokusesha. Ukuze ubhalise isayithi yakwa-Google, nje faka igama ngesimo isayithi ekhethekile ngefomethi ecacisiwe bese wengeza imibono uma uthanda. Ngemva kwalokho, chofoza "Engeza i-URL». Ukuze uthole ekhasini yokubhalisa, kumelwe uthayipha yimuphi injini yokusesha ibinzana yokubhalisa indawo ku-Google bese uya esinye salezi izinketho.
AmaThuluzi e-Webmaster ku-Google - iyisevisi ekhethekile esiza ukuxazulula eziningi izinkinga lokufaneleka kubo. Nale isevisi ungakwazi ukuxilonga izinkinga zangaphakathi isayithi ngokuya enjini, ucacise esifundeni okuyiwona yadalwa, futhi ubone izibalo jikelele. Ukuze uqalise isevisi udinga ukubhalisa, futhi ngenxa yalokhu, bakhuphukele bese ufaka igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi. Isevisi Ubuye isixhumanisi lapho ungakwazi ukuthola ngokufaka nombuzo elandelayo: Amathuluzi we-Google ukuze webmaster.
I-Google Analytics - Service lokuqoqa kucutshungulwa kwezibalo idatha site. Lena inkonzo ebalulekile ihlinzeka umsebenzisi ulwazi oluphelele kakhulu kubavakashi. Lezi idatha ethulwa namathebula namashadi. ungazithola kanjani izikhathi eziningi futhi lapho kwaba ukuvakasha kanye eziningi neminye imininingwane ewusizo kakhulu. Anqume isixhumanisi kokubhalisa kule inkonzo kungaba ngendlela efanayo ngenhla ngokuthayipha umbuzo: I-Google Analytics.
inkinobho ye +1
Lena inkinobho yokuxhumana ye-Google. Ukuze uyibeka kusayithi ufuna ukufaka inkinobho ekhasini script ngamunye. Ngemva kwalokho, kuyoba khona kuwo wonke amakhasi, isivakashi uzokwazi ucindezela. Futhi uma inkinobho uzobe sicindezelwe, ezibaluleke kakhudlwana leli khasi kuyoba izinjini-Google kanye amazinga aphakeme.
Ukuze kusheshiswe yokufaka, ungazama ukubhalisa isayithi ku-Google lwemibhalo khulula DMOZ. Ukuze ukubhaliswa efanele, izimo ezimbili kumelwe eneliseke. Eyokuqala - ukuthola indawo efanelekayo ngendaba esigabeni. Okwesibili - kubalulekile ukuthi lesi sigaba thematic kwaba umhleli, imininingwane okuyinto zitholakala ezansi ikhasi lokubhalisa. Emva "Ukucinga" futhi "Khetha" zenziwa, ungakwazi uchofoza "Faka i-URL" futhi ukubhaliswa seliphelele.
Njengoba ubona indawo yakho efakwe ohlwini e-Google ilula, into esemqoka - ke isifiso, ukubekezela nokuphikelela. Ngikufisela inhlahla!
Akhethekile ekuthuthukiseni iwebhusayithi.
Izihloko ehlukile kusayithi lakho
Horoscope Aquarius: Flowers for Aquarian
Inkinga ubuhlobo phakathi komuntu nemvelo: agumenti kwemvelo
Izimpesheni e Belarus ukwanda, zilwane, isayizi,
Indaba kanye nabalingisi we ifilimu "Yulia"